पुष्पकमल दाहालको त्रास कि आश ! ‘हेग लगे विश्वकै हिरो हुन्छु, संसारले चिन्छन्’ – Himshikharnews.com
पुष्पकमल दाहालको त्रास कि आश ! ‘हेग लगे विश्वकै हिरो हुन्छु, संसारले चिन्छन्’
१३ श्रावण २०७६, सोमबार १९:०५
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग लगिए पनि केही फरक नपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार आफ्नै निवासमा नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै उनले आफूहरुलाई हेग लैजाने र एक दिन भए पनि जेल हाल्ने भनेर गरिएको प्रचार डिजाइनअन्तर्गत भएको जिकिर गरे । दाहालले आफूलाई हेग लगेर विश्वकै हिरो बनाउलान् भन्ने चाहिँ नलागेको पनि बताए ।
दाहालले यसो भने पनि दशक लामो माओवादी सशस्त्र हिंसाका समयमा गरिएको मानव अधिकार ज्यादतीको मुद्दामा कतै आफुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म लैजान्छन् कि भन्ने संशय उनलाई रहेको देखिन्थ्यो । खासगरी माओवादीको पूर्वबालसेनाका संयोजक लेनिन विष्टको युरोप यात्रा र त्यसपछि आएका खबरले दाहाललाई झस्काएको देखिन्छ । इमेजखबरबाट